Ronsco na-akọwa nkenke akụkọ ihe mere eme nke mmepe nke superalloy-Company News-Hunan Allianz Metal Products Co., Ltd.
Ronsco na-akọwa nkenke nkenke akụkọ ihe mere eme nke mmepe nke superalloy
Oge: 2021-08-18 HITS: 6
Ebube bụ otu n'ime ihe ndị a na-ejikarị eme ihe n'ụlọ ọrụ dị iche iche na mba anyị n'afọ ndị na-adịbeghị anya, mana akụkọ mmepe ya na-ebute n'ezie n'ime obodo site na nkà na ụzụ mmepụta ígwè nke mba ọzọ. Ronsco na-ewebata akụkọ mmepe nke superalloy nkenke.
Usoro mmepe nke superalloys
Kemgbe ngwụcha afọ 1930, Briten, Jamanị, United States na mba ndị ọzọ amalitela ịmụ ihe gbasara superalloys. N'oge Agha Ụwa nke Abụọ, iji gboo mkpa nke igwe ikuku ọhụrụ, nyocha na ojiji nke superalloys batara n'oge mmepe siri ike. Na mbido 1940s, Briten buru ụzọ tinye obere aluminom na titanium na 80Ni-20Cr alloy iji mepụta usoro γ┡ maka ikesi ike, wee mepụta alloy nke mbụ dabere na nickel nwere ike dị elu dị elu. N'otu oge ahụ, United States malitere iji Vitallium cobalt alloy na-eme ka agụba iji gboo mkpa nke mmepe nke turbochargers maka piston aero-engines. Tụkwasị na nke ahụ, United States emepụtawokwa alloys dabeere na Inconel nickel iji mee ụlọ ọkụ ụgbọ elu. Mgbe e mesịrị, iji mee ka ike okpomọkụ dị elu nke alloy dịkwuo mma, ndị na-emepụta metallurgists gbakwunyere tungsten, molybdenum, cobalt na ihe ndị ọzọ na ihe ndị dị na nickel na-eme ka ọdịnaya nke aluminum na titanium dịkwuo elu, ma mepụta usoro nke alloys, dị ka British "Nimonic" na American "Mar-M" na "IN", wdg; na cobalt dabeere alloy, nickel, tungsten na ihe ndị ọzọ na-agbakwunyere ịzụlite a dịgasị iche iche nke elu-okpomọkụ alloys, dị ka X-45, HA-188, FSX-414, wdg N'ihi enweghị cobalt akụrụngwa, na Amachibidoro mmepe nke superalloys dabere na cobalt. N'afọ ndị 1940, e mepụtakwara superalloys ndị nwere ígwè. Na 1950s, ụdị dị ka A-286 na Incoloy901 pụtara. Agbanyeghị, n'ihi nkwụsi ike ha dị elu na-adịghị mma, mmepe ha ejirila nwayọ nwayọ kemgbe 1960. Ndị Soviet Union malitere ịmepụta "EИ" akara nickel nke dabeere na nickel gburugburu 1950, ma mesịa mepụta usoro "ЭП" nke superalloys ndị nwere nkwarụ na usoro "ЖС" nke nkedo superalloys. China malitere mmepụta nke superalloys nnwale na 1956, wee jiri nwayọọ nwayọọ mepụta usoro "GH" nke superalloys nwere nkwarụ na usoro "K" nke nkedo superalloys. N'afọ ndị 1970, United States nakweere usoro mmepụta ọhụrụ iji rụpụta agụba kristal na ntụ ntụ metallurgy turbine disks, wee mepụta otu agụba kristal na ihe ndị ọzọ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ iji gboo mkpa nke ịba ụba okpomọkụ na ntinye nke turbines aero-engine. .
Ụzọ na-abawanye ike
The superalloy kwesịrị inwe nnukwu creep ike na ntachi obi ike, ezi thermal ike ọgwụgwụ na n'ike ike ọgwụgwụ (lee ike ọgwụgwụ), ezigbo oxidation na gas corrosion iguzogide, na kwụsie ike nzukọ. N'ime ha, ike na-akpụ akpụ na ike ntachi obi bụ ihe kacha mkpa . Ụzọ isi meziwanye ike nke superalloys bụ:
Ngwọta siri ike na-ewusi ike
Mgbakwunye nke ihe (chromium, tungsten, molybdenum, wdg) dị iche iche atomiki nha site na isi metal na-akpata mgbagwoju anya nke isi metal lattice, mgbakwunye nke ihe ndị nwere ike ibelata stacking mmejọ ike nke alloy matrix (dị ka cobalt). ) na mgbakwunye nke ihe ndị nwere ike ibelata mgbasa ozi nke matrix element Elements (tungsten, molybdenum, wdg) iji mee ka matrik ahụ sie ike.
Na-ewusi mmiri ozuzo ike
Site na ọgwụgwọ ịka nká, usoro nke abụọ (γ┡, γ", carbide, wdg) na-ebuli site na ngwọta siri ike nke supersaturated iji mee ka alloy siri ike (lee oge alloy). -centered cubic Ọdịdị, lattice The mgbe niile yiri matriks na coherent na crystal, otú γ┡ oge nwere ike uniformly precipitated na matriks n'ụdị ezi ahụ, nke na-egbochi mmegharị nke dislocations na-arụpụta a ịrịba ike mmetụta. Oge γ┡ bụ ụdị A3B intermetallic compound, na A na-anọchi anya Nickel, cobalt, B na-anọchi anya aluminum, titanium, niobium, tantalum, vanadium, na tungsten, ebe chromium, molybdenum, na ígwè nwere ike ịbụ ma A ma ọ bụ B. The Agụmakwụkwọ γ┡ na alloys dabeere na nickel bụ Ni3 (Al, Ti) Mmetụta ike nke γ┡ usoro nwere ike isi n'ụzọ ndị a sikwuo ike: ogo kwesịrị ekwesị nke ndakọrịta iji nweta ike ef mmerụ ahụ na-agbanwe agbanwe; ③Tinye niobium, tantalum, wdg. Ihe ndị na-eme ka ike mgbochi nke ngalaba γ┡ na-eme ka ike ya sie ike iguzogide igbupụ; ④ Ịtinye cobalt, tungsten, molybdenum na ihe ndị ọzọ iji mee ka ike nke γ┡ dị elu. Usoro γ" bụ usoro tetragonal nke na-adabere na ahụ, na ihe mejupụtara ya bụ Ni3Nb. N'ihi nnukwu ogo nke adịghị ekwekọ n'etiti oge γ" na matrix, ọ nwere ike ime ka ọkpụkpụ dị ukwuu nke mgbagwoju anya, nke mere na alloy nwetara. ike mkpụrụ dị elu. Otú ọ dị, mmetụta ike na-ebelata nke ukwuu mgbe okpomọkụ karịrị 700 ℃. Superalloys dabere na Cobalt n'ozuzu anaghị enwe γ┡ nkeji, ebe ha na-eji carbide na-ewusi ike.
Ịkwado oke oke ọka
N'ebe okpomọkụ dị elu, oke ọka nke alloy bụ njikọ na-adịghị ike, na ịtinye obere boron, zirconium na ihe ndị na-adịghị ahụkebe ụwa nwere ike imeziwanye ike nke oke ọka. Nke a bụ n'ihi na ihe ndị na-adịghị ahụkebe nke ụwa nwere ike ime ka ókèala ọka dị ọcha, boron na atom zirconium nwere ike mejupụta ohere nke oke ọka, belata ọnụego mgbasa nke oke ọka n'oge usoro na-akpụ akpụ, na-egbochi mkpokọta nke carbides nke ọka ma kwalite spheroidization nke abụọ. oge nke oke ọka. Na mgbakwunye, ịgbakwunye hafnium kwesịrị ekwesị na nkedo nkedo nwekwara ike imeziwanye ike na plasticity nke oke ọka. A pụkwara iji ọgwụgwọ okpomọkụ mee ka agbụ-dị ka carbides dị n'ókè ọka ma ọ bụ mee ka ọ na-ehulata oke ọka iji meziwanye plasticity na ike.
Oxide mgbasawanye ike
Site na usoro metallurgy ntụ ntụ, a na-agbakwunye obere oxides nke na-adịgide adịgide na okpomọkụ dị elu na alloy na steeti gbasasịrị, si otú a na-enweta mmetụta na-ewusi ike dị ukwuu. oxides a na-agbakwunyekarị gụnyere TO2 na Y2O3. Ihe ndị a oxides na-ewusi alloy ike site n'igbochi mmegharị nke dislocations ma na-eme ka ọkpụkpụ nkwụsịtụ kwụsị.
Ronsco bụ Ọkachamara Nrụpụta na Supplier nke Special Alloy & Superalloy High Precision Forgings ， Mgbe afọ 25 nke mmepe gasịrị, Ronsco etoola ihe karịrị ndị ọrụ 200, ọkara n'ime ha na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ alloy dị elu maka ihe karịrị afọ 10. E wezụga nke ahụ, anyị nwere ndị ọkachamara ngwaahịa 15 na ndị ọkachamara nwere ahụmahụ iji hụ na ngwaahịa ahụ dị mma.
Ronsco nwere ikike ọla pụrụ iche pụrụ iche nke mba ụwa, gụnyere 6-ton Vacuum Induction oku, 6-ton Vacuum Arc Remelting, 18-ton Electroslag Remelting na 18-ton Argon Nchekwa Electroslag Remelting, 20-ton AOD refining oven, 20-ton LF refining. Furnace, 20-ton VOD refining oven, mmepụta ahịrị, 25MN & 8MN igwe na-akpụ akpụ, ụdị 450 & 320 Rolling Machine, ụdị 90 igwe kwụ ọtọ, ụdị 40 igwe kwụ ọtọ na 7 rollers hyperbolic curve, ụdị 40 igwe kwụ ọtọ na rollers 11, ụdị 100 igwe na-eku ọkụ, ụdị 40 na-egweri igwe, ụdị 83 igwe na-egweri na-enweghị isi na ụdị 80 igwe na-egweri igwe.
Azụmahịa anyị etoola ma tolite site na ụlọ ọrụ ọdịnala gaa na teknụzụ ọhụrụ ndị ọzọ dị ka mmanụ & gas, petrochemical, nuklia, ọgwụ nje, ike eletrik, ịrụ ụgbọ mmiri, ụgbọ elu na ikuku.
Anyị enyela anyị elu-edu Ni-base alloy na Co-based alloy materias ka ihe karịrị 60 mba ahịa. Anyị nwere ọtụtụ uru akara akara alloys dị ka 245SMo, 17-4PH, 904L, S32760, Nitronic 60, Nimonic C263, Inconel 713C, Inconel 718, Inconel 601, Incoloy 901, na Monel K500.
Nnukwu ire ere bịara! Ronsco nyere 5% -20% ego maka Nickel Alloy